Ntughari akwukwo nke umu akwukwo n'akwukwo n'akwukwo akuko nke oma
Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ntughari akwukwo nke umu akwukwo n'akwukwo n'akwukwo akuko nke oma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Cheeky“. Anyị Ruben Loftus-Cheek Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Alan Shearer Nwa akwukwo akụkọ nke ihe omuma
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ọ nwere ijigide ihe mgbe ọ bụla enyere ya bọl. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Ruben Loftus-Cheek's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Igwe Ntughari nke Ntughari nke Ruben - Nduzi na Ezin'ulo:
Isi Igwe Igwe a mụrụ na 23 nke Jenụwarị, 1996 na Lewisham, London, United Kingdom. A mụrụ ya na nne Britain, Juliette Cheek na nna Guyanese, Trevor Loftus (nna). Igwe ihu igwe nke Ruben bụ nke sitere na agbụrụ Guyanese.
IHE: Guyana bụ mba na-asụ Bekee na South America ugwu North Atlantic. Obodo a jikọtara ọdịnala na mpaghara Caribbean.
Nna Loftus-Cheek, Trevor Loftus hapụrụ Guyana wee kwaga UK na ụmụ ya nwoke atọ tupu amụọ nwa nwoke ikpeazụ ya bụ Ruben.
A hụrụ anya ihu igwe dị ka onye mmụta ngwa ngwa n'oge ọ bụ nwata. Ọ gbasoro nzọụkwụ nke ụmụnne ya ndị okenye bụ ndị na-egwuri egwu na Premier League. Ruben, nke dị n'okpuru ebe a na Dominic Solanke, Abramovich na Tammy Abraham nwere nnukwu mmalite na Ụlọ Akwụkwọ Ntorobịa Chelsea.
Max Aaron's Child Story Plus Ihe na-adịghị agbanwe agbanwe akụkọ ndụ
N'ịbụ onye a ma ama maka ọgụgụ isi ya na pitch, ọ toro ogologo ma sie ike karị ma nwee ike ịsọ mpi na ndị toro eto maka ọnọdụ ha. Nke a dugara n'ọganihu na ihe ịga nke ọma nke mere ka ọ nọrọ n'ọnọdụ ọ nọ taa.
Ruben Loftus-Cheek Girlfriend - Nwunye ka ọ bụrụ:
Ọ bụ ezie na Ruben na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, ọ na-ejikọta ya na ụdị Bekee, àgwà telivishọn na onye na-eweta Ferne McCann bụ onye kwetara na ọ na-ezigara ndị na-agba ọsọ na Twitter.
Na-ekwu okwu na Anyanwụ banyere ndụ ịhụnanya ya, kpakpando TOWIE kwuru, sị:
“Otu onye slid m kpọmkwem ozi na Twitter a ụbọchị ole na ole gara aga ezie na! Agaghị m ekwu onye. Ọ bụ ihe omimi m na edu nsị. ”
Mgbe ọ gbalịrị idebe mgbanwe ahụ n'okpuru, akụkọ nyocha gosipụtara na Ruben Loftus-Cheek bụ onye ikpeazụ Ferne gbasoro na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta (n'oge ahụ).
Eziokwu ahụ bụ na e nweghi ọtụtụ ndị ọgba bọọlụ n'etiti ihe karịrị 1000 ndị ọ soro.
Ka ọ dịgodị, Ruben ka na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye n'agbanyeghị njikọ ya na onye mmeri Love Island 2017, Amber Davies bụ onye gbalịrị ịbịaru nso na Football Genius site na ozi.
O kwukwara banyere Ruben mgbe ọ nọ n'oge mkparịta ụka, jụọ ya banyere echiche ya banyere ndị ịgba egwu.
O kwenyeghi. Ahụtụbeghị m ihe ọ bụla dị ka ya ná ndụ m. Ọ bụ nwa zuru oke, (sic).
Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe - Ọ tụrụ ya ugboro abụọ:
Igwe ọkụ na-agba ọkụ na-ewu ụlọ n'ụlọ Ruben na June 2016, na-ede akara nke ugboro abụọ Ruben na ezinụlọ ya tara ahụhụ n'aka nne.
Afọ 11 gara aga, àmụmà ka na-etukwa n'otu ụlọ ahụ. Ha sịkwa na àmụmà anaghị ada ugboro abụọ… hmmm…
EZIOKWU: Nkwupụta ochie ahụ na 'enwu anaghị egbu otu ebe ugboro abụọ' bụ akụkọ ifo ọzọ nke onye ọ bụla na-enyocha mmiri ozuzo ma ọ bụ na-eme nchọpụta ahụla ihe okike.
Michael Carrick Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Nke a bụ ihe gbasara Ruben Loftus-Cheek. N'ezie, inye oge zuru oke, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Lightning nwere ike iti ebe ọ bụla ihe karịrị otu oge.
Igwe ntughari nke nkpuru obi - Nlekọta na Nchịkọta:
O sonyeere ụlọ akwụkwọ ntorobịa Chelsea FC mgbe ọ dị obere nke afọ 8. Ọ masịrị na mmalite nke ọrụ ya tupu ya ebute mmerụ ahụ, nke ọ gbakere.
Kemgbe ahụ, ọ nọgidere na-amasị ụlọ ịgba egwu. Ọ mere ka ọ bụrụ onye mbụ maka Chelsea n'okpuru 18s mgbe ọ bụ naanị 14. Loftus-Cheek bụ akụkụ nke ndị otu Chelsea bụ ndị meriri UEFA Youth League ikpeazụ na 2015, n'akụkụ Tammy Abraham na Dominic Solanke.
Nathaniel Clyne Child Story Plus Na-emeghe akụkọ ihe omuma
All thanks for his good form in his youth team, A na-akwụghachi ụgwọ mkpuchi ụgwọ site na nchịkọta ego nke of 1.7million kwa afọ mgbe ọ bụ nanị 17 afọ.
Nke a tinyere nkwalite nye ndị otu ndị okenye na Chelsea. Nkwekọrịta nke Chelsea nyere Ruben Loftus-Cheek dara tabloid iwe. Ụfọdụ ndị nkatọ kpọrọ ya 'nkọcha na bọọlụ nke oge a'.
N'ezie, £ 1.7million n'afọ ọ bụla na-eme ka Ruben Loftus-Cheek ego maka ndụ n'agbanyeghị na ọkụ na bench na mbụ, ọ dịghị mgbe e gosipụtara na egwuregwu maka ndị mbụ Chelsea.
Mgbe ọ na-edebanye aka n'akwụkwọ ọhụrụ ya, Loftus-Cheek kwuru, sị:
"Ụlọ ọrụ ahụ emeela m nke ukwuu n'ihi na amalitere m ebe a mgbe m ruru afọ asatọ ma ugbu a, achọrọ m ịkwụghachi okwukwe ha gosipụtara m na arụmọrụ m na pitch."
Kemgbe ahụ, o meela aha maka onwe ya karịsịa n'oge na-adịbeghị anya na Njikọ Mba England.
Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe:
Igwe Igwe Igwe Ntugharị Ruben sitere na nzụlite ezinụlọ bara ọgaranya. Mụnna ya ndị okenye bụ ndị na-egwu bọl ọkachamara mere ọtụtụ ego n'oge elu ha. Nke a bụ maka akụ na ụba nke ezinụlọ ya.
Nna ya, Trevor Loftus kwuru na nso nso a Jose Mourinho jidere nwa ya nwoke na Chelsea. Iwe Trevor Jose Mourinho bịara na nkwenye na-adịghị mma a na-ekwu na ọ bụ nwa nwoke na-eto eto na Stamford Bridge. N'okwu ya…
'Ọ kwesịrị ịdị na-egwu egwu. Onye ọ bụla nọ n'azụ na-ajụ: "gịnị kpatara na ọ naghị egwu?… Ọ bụrụ na Ruben na-egwu egwu Mauricio Pochettino, ọ ga-enwe 70, 80, 90 mbido nke mbụ na ugbu a. '
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, Trevor kelere ya Antonio Conte maka iziga mkpuchi ihu na oge mgbazinye oge na Crystal Palace nke onye ọkpụkpọ jiri jiri gbapụta onwe ya.
Trevor dị ngwa ịkatọ Jose Mourinho mana echefuru eziokwu ahụ bụ na Jose bụ onye rịọrọ ka Loftus-Cheek nye ya nrite mgbe ọ kpọchara ugboro atọ na mmeri Chelsea na 2014-15.
Nne: Juliette Cheek bụ nne Britain nke Ruben Loftus -ekpu. Ọ bụ onye na-elekọta ụlọ, bụ onye a na-eto eto maka mgbe ọ na-azọpụta ụlọ ya mgbe ọkụ na-egbu ụlọ ya.
Ruben's mum- Juliette Cheek.
Igwe Igwe Ntughari Ruben nwere ọkara ụmụnne. Onye nke okenye bụ Wayne Cort, onye lara ezumike nká nke lara ezumike nká nke na-amaghị ọrụ ya nke ọma, n'adịghị ka ụmụnne ya.
A mụrụ Carl Cort nwanne nwoke nke abụọ nke okenye Ruben Loftus-Cheek na 1st nke November 1977. Ọ bụ onye England bụbu onye Guyana nke bụbu onye egwuregwu bọọlụ nke mechara bụrụ egwuregwu maka Tampa Bay Rowdies na North American Soccer League.
Carl Cort gbara bọọlụ na Wimbledon, Lincoln City, Newcastle United, Wolverhampton Wanderers, Leicester City, UD Marbella na Norwich City.
Nwanne nwoke ọzọ toro eto, bụ Leon Cort ugbu a bụ onye na-achọ Bolton Wanderers FC Leon Cort bụ onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ Guyan nke na-egwuri egwu.
Ọ bụ nwanne nwanne nwoke Carl Cort na ezigbo nwanne nwoke nke Ruben Loftus-Cheek. O sonyeere Crystal Palace n'oge okpomọkụ nke 2006 tupu ịbanye Stoke City na October 2007. Ọ na-egwuri egwu maka Burnley, Preston Northend na Charlton Athletic.
Igwe ntughari nke Igwe - Ntughari Ya:
Ọ bụ ezie na ndị nọ na Chelsea nọ na-akpọ Loftus-Cheek dị ka Micheal Ballack ọhụrụ nke klọb, n'ihe gbasara igwu egwu, ọ dị nso na bọlbụ na-atụ egwu egwu dị ka Patrick Vieira.
Ekele Uhie- Patrick Viera nke taa.
ya FA Bio kwuru na ọ ka mma karịa ka anyị nwere ike. N'okwu ha…
“Na 6ft 4in ogologo, Loftus-Cheek siri ike ịhapụ. Onye toro eto, nke na-ebute oke ọkpọ ọkpọ na igbe, ọ nwere ike na ike dị ukwuu n'ihe nwere ike ịnwe ikike ịgafe ma ọ bụ tinye ya. Ezigbo ihe niile. ”
Michael Ballack, bụ onye Germany na-ekwu akụkọ ya na Germany, ka na-anọgide na-akpali akpali. Igwe ihu-ala na-ekwu n'otu oge;
"Ndị na-eto eto m na-ekwukarị, 'Lelee egwuregwu Chelsea na German, lelee Ballack !!!' ”
Igwe nlegharị anya nke Ruben.
Igwe ntughari nke engha - Eziokwu - Barcelona gbalịrị ịbanye ya ozugbo:
Mgbe ike gwụrụ ndị na-eto eto na-egwu egwu nke ndị Europe na-eme egwuregwu (ihe atụ, Cesc Fabregas), Barcelona kpebiri ịbịa Ingland ma megwara na 2012 na njide nke Ruben Loftus-Cheek site na Chelsea.
Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ ya maka arụ ọrụ U19 England ya megide Wales Ndị nke Barca anya. Ọ bụ ya mere Chelsea ji guzosie ike ma bịanye aka na Ruben ka ọ bụrụ ihe ga-eme ogologo oge.
Igwe Ntughari Ntughari Ntughari Ntughari - FIFA Issue:
A na-ele anya na a na-elee anya elu na ntinye aka dị ka ọ dị na nso nso a. Ọ bụ ezie na FIFA 15 na-eme ihe nkiri football ya n'oge gara aga.
Otú ọ dị, o yiri ka a na-eji nwayọọ nwayọọ eme ihe ziri ezi dịka ọkwa ya na FIFA 18 bụ nnukwu mmelite nke ka na-eme ka ihe dị ukwuu.
Igwe Ntughari nke Ntughari Ntughari Eziokwu -Ọ bụrụ na ọ bụghị ndị na-agba ọsọ, ọ ga-abụ onye TTuber:
Na mbara igwe ọzọ, anya Igwe nwere ike ịbụ kpakpando YouTuber ka ọ malitere a YouTube chanel nke ahụ hụrụ ya ka ọ na-egwu egwu na-eme ka ọ na-egwuri egwu na bọl nke sọks na ịmepụta FIFA 15 nkà egwuregwu n'ubi ya.
Egwuregwu bọọlụ na-akpọ oku siri ike - Igwe ihu ga-abụ Youtuber O di nwute, agbanyeghị ọwa ahụ kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a n'ihi ntinye aka ya na football.
Ọ nwetara onye isi ọhụụ mgbe ọ bụla egwuregwu 6:
Maka igwu egwuregwu 30 Premier League mbụ ya, Loftus-Cheek hụrụ ngụkọta nke ndị njikwa 6 na-azụ ya. Ha gụnyere Jose Mourinho (Chelsea FC), Guus Hiddink (Chelsea FC), Antonio Conte (Chelsea FC), Frank de Boer (Crystal Palace na Roy Hodgson (Crystal Palace).
Michail Antonio nwa akwukwo akụkọ nke bu ihe omuma
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Ruben Loftus-Cheek Child Akụkọ nke a na-agbakwụnyeghị Eziokwu Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Akwukwo nke Fulham
Ndị na-akwado Chelsea
O nwere ụmụnne ndị ọzọ isiokwu ahụ ekwughị. Otu onye ka ana akpo Isaac Loftus Cheek. Ọ nọ gburugburu afọ Ruben, ejighị n'aka ma ọ bụ okenye ma ọ bụ nwata. Nwanne nwanyị ọzọ nke na-eto eto bụkwa Igwe Ntugharị.
Ruben enweghi nwanne nwoke nke nta?